Iindaba - Ngaba uyazi zonke iintlobo zomgangatho?
Umgangatho yinto yomgangatho ekungekho lula ukwenza iimpazamo kuyilo kunye nomdlalo, kwaye kukho ukhetho oluninzi lwezixhobo zomgangatho, ke namhlanje ndiza kukuthatha ukuba uqonde ukuba zeziphi iintlobo zemigangatho ezikhoyo.
Eli nqaku lihlalutya ikakhulu imigangatho emine ephambili:
Ubunjineli boMgangatho oLukhuni (iParquet)
Umgangatho oQinisekisiweyo woMthi
Umgangatho weLaminate (Umgangatho weLaminate)
Nye. Ubunjineli bomgangatho weHardwood (Umgangatho oqinileyo womthi)
Uhlobo lweplanga eqinileyo yomthi, ihlala iqulunqwe ngamabhodi aliqela (umaleko wokunxiba, umaleko wokuhombisa, umaleko wokuxinana kwe-substrate, umaleko wokulinganisa). Nangona elona candelo liphambili lingumthi, lizinzile ngaphezu komgangatho wokhuni olomeleleyo: kuba umgangatho womthi oqinileyo uqokelelwe ngokukodwa, awunangxaki yokuqobeka ngokulula njengokuthamba komthi oqinileyo. Xa kuthelekiswa nomgangatho womthi oqinileyo, ukuqiniswa komthi oqinileyo kunciphile kwaye kunzima, kodwa kunokudlulisa ubushushu kwaye kulula ukukugcina.
① Ukunxiba nokumelana nokunyanzeliswa process Inkqubo elula yokufaka patterns Iipateni ezininzi ④ Kulula ukuyinyamekela
Ayinakulungiseka Eminye imigangatho iya kusebenzisa iglu ye-formaldehyde, ke kukho ingxaki yokukhupha i-formaldehyde. Xa ukhetha, kuya kufuneka ubone ukungalingani kwayo kwe-formaldehyde. Ubomi: iminyaka engama-25 ukuya kwengama-40 (ukuba igcinwe kakuhle, inokusetyenziswa ixesha elide)
Mbini. Umgangatho oQinisekisiweyo woMthi
Umgangatho weplanga oqinileyo, osuka kwigama lawo, akukho nzima ukucinga ukuba ngumgangatho owenziwe ngomthi, ke uya kulunge ngakumbi kwindalo nakwindalo. Nangona kunjalo, ngenxa yeempawu zendalo zomthi, umgangatho owenziwe ngayo uya kukhubazeka ngokulula kwaye ungangeni manzi. Nokuba uninzi lwabantu lucinga ukuba ukutyibilika kweplanga eliqinileyo kuya kuba phambili ngakumbi, ukusilela kwayo akunakuhoywa.
Ithambile, kwaye iinyawo zivakalelwa kukuba ziya kuthandwa ngabantu abaninzi kuzo zonke iintlobo zemigangatho. AuseNgokuba akukho phethini imiselweyo, wonke umgangatho uhambelana kwaye ugqibelele, ke umgangatho womthi oqinileyo "unokuhlaziywa" ngokucoca.
Kulula ukukrwela ②Ingxaki yokuchasana ebangelwe kukwanda kobushushu kunye nokuncipha kukhulu kakhulu ③Akungenawo manzi ④Izinambuzane nezinambuzane
Ubomi: iminyaka engama-70 ukuya kweli-100
Ntathu. Umgangatho weLaminate (Umgangatho weLaminate)
Umgangatho wenziwe ngomthi oqinileyo owaphukileyo, waqhubekiswa waba ngumsonto wokhuni, emva koko ucinezelwa emithini kubushushu obuphezulu njengezinto ezisisiseko, emva koko zogqunywe ngomaleko wokuhombisa, umaleko wokuqinisekisa ukufuma, njl. Kuqhelekile kakhulu kwintengiso. Kuba ayibizi kwaye ayifuni kulondolozwa kakhulu, iya kusetyenziswa ekhaya okanye eofisini ngabathengi abafuna ukusebenza kwexabiso eliphezulu.
NeIngabizi kakhulu ②Ukuqina okuphezulu kunye nokuxhathisa okuqinileyo kweArasion
HereZizakubakho iingxaki ezinje ngokugoqeka emva kweblister ②Iinyawo ziziva zilukhuni ③Umgangatho awulingani, kunzima ukufumana umgangatho okumgangatho ophezulu iingxaki
Zine. IVinyl Flooring (umgangatho weplastiki)
Uhlobo lomgangatho olukhule ngokuthe ngcembe kule minyaka ilishumi idlulileyo. Abantu abaninzi abazi kangako malunga nolu hlobo lomgangatho. Xa kuziwa kumgangatho we-vinyl, baya kuyidibanisa nesikhumba somgangatho, iiplastiki, njalo njalo. .
Kodwa enyanisweni, eyona nto iphambili yophahla lweplastiki yi-polyvinyl chloride, isixhobo esisetyenziswe kakhulu kubomi bethu. Umzekelo, uninzi lwezixhobo zonyango zisebenzisa i-polyvinyl chloride.
Umgangatho weplastiki, okwabizwa ngokuba yi-PVC flooring, wahlulwe ngokwahlukeneyo kwi-Vinyl Flooring yesiNtu (ukutyibilika kweplastiki kwesiko) kunye neRinid Core Vinyl Flooring (i-hard core flooring), kunye neplastiki engqingqwa yomgangatho oqinileyo yahlulwe yaba yi-WPC (iinkuni zeplastiki) kunye ne-SPC ( Umgangatho weplastiki wamatye). Umgangatho) iintlobo ezimbini, kwaye kwezi ntlobo zimbini, zombini ngokubhekiselele kukhuselo lokusingqongileyo kunye nomgangatho, i-SPC ibhetele:
①Ukunganyangeki kunye nokunyanzela proofSlip-proof ③Flame retardant ④Ukungena kwamanzi kunye nobungqina bokufuma
Ukoyikeka kokukrwitshwa zizixhobo ezibukhali
Ezi zilapha ngasentla zezona ntlobo zixhaphakileyo zemigangatho kwintengiso. Ngapha koko, phantse akunakwenzeka ukufumana umgangatho ngexabiso eliphantsi kunye nomgangatho olungileyo, kungekuphela nje ixesha elide lenkonzo, kodwa nangaphandle kwesondlo. Uyawuqonda umgangatho ngamnye ngokwesihlandlo. Iimpawu zomgangatho: inkqubo yofakelo, imiba yokusingqongileyo, nokuba ayinamanzi okanye ubungqina bokufuma, njl., Ngokusekwe kulo lonke ulwazi olungentla, ndiyakholelwa ukuba ndingacebisa umgangatho olungele wonke umntu.
Ixesha Post: Jul-13-2021